AMISOM oo lagu eedeeyey iney kufsadeen haween Soomaaliyeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay xubno ka tirsan ciidamada nabad-ilaalinta u joogo Soomaaliya ee AMISOM in ay ku kaceen xadgudubyo isugu jira kufsi iyo xadgudubyo n kale oo loo geystay haween.
War-qoraal ah oo ay soo saartay hay’adda ayaa lagu sheegay in ilaa 21 dumar ah oo isugu jira haween waaweyn iyo gabdho ay da’doodu aad u yar tahay ay sheegeen in la kufsaday iyo in qaab faraxumeyn ah ay uga faa’iideysteen ciidamada Uganda iyo Burundi ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM.
Warbixinta Human Rights Watch oo ka kooban ilaa 71 bog ayaa lagu sheegay in haweenka la kufsaday ay kaalmo daawo iyo biyaha la cabo ah u raadsadeen xarumaha ciidamada AMISOM.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in dumarka la wareystay qaarkood la siiyay kaarar ay xerada ku galaan si ay u fududaadaan xadgudubyada loo geysanayo.
Afhayeenka ciidamada AMISOM, Col Cali Aadan Xumad ayaa warbixinta Human Rights Watch ku tilmaamay mid aan xaqiiqo ahayn, ayna tahay wax ay iska soo dhoodhoobeen dad uu sheegay in ay leeyihiin dano gaar ah.
Col. Cali Aadan Xaamud ayaa xusay in saraakiisha AMISOM aan wax xiriir ah lagala soo sameyn diyaarinta warbixinta, taasna ay caddeyn u tahay in dad doonaya in ay ku cayaaraan sharafta ciidamada AMISOM ay ka shaqeeyeen qorista warbixinta.